Ambongadiny 6.5 mirefy fikolokoloana biby fiompy mahia hety anty nify hety ho an'ny mpanamboatra alika sy mpamatsy | Icool
6.5 mirefy fikolokoloana biby fiompy mahia hety anty nify hety ho an'ny alika
Modely ： AT-6530X
Size: 6,5 santimetatra, nify 30
Endri-javatra: hety Thinning biby
● Ny endrik'ity hety manify ity dia tsy manam-paharoa, ary ny endrika nify dia manana endrika "w", antsointsika hoe nify tandindona izy ireo. Manapaka nify kely roa ny nifiny tsirairay. Ny fanapahana dia tena mora, maranitra ary tsy mihetsika, ka aza matahotra ny hisintona volo biby. Noho ny endrika nify manokana dia milamina sy fisaka ny velaran'ny fanetezana.
● Ity hety ity dia 7 santimetatra ary manana nify 30. Ny tombony azony dia ny tahan'ny fanalefahana volo dia somary avo, manodidina ny 30-35%. Ireo hety nify volo ireo dia vita avy amin'ny Stainless Steel Japoney 440C avo lenta, tsara voadio, maranitra ary mateza.
● hety manify ampiasaina amin'ny manify ny volo amin'ny palitaon'ny biby fiompy. Manana lelan-nifify tsara sy volo fanapahana izy ireo, koa raha zatra manety volo dia esorin'izy ireo ny volo sasany, manify ny volo ary hataony voajanahary sy tsara tarehy kokoa ny volo.
● Ny famolavolana lavaka rantsantanana dia antonony ary mety ho an'ny lahy sy ny vavy. Milamina ny atin'ny peratra ary tsy hikosehana ny rantsan-tànanao. Volavola namboarina, tsara indrindra ho an'ny rehetra. Ny tahon'ny hety dia misy muffler, noho izany dia tsy hisy tabataba hampitahorana ny biby fiompinao mandritra ny fizotran'ny fanapahana.
6.5 santimetatra, nify 30
Gunting manify amin'ny alikaola
Teo aloha: 7,0 mirefy alika fikolokoloana alika fikoloana hety
Manaraka: Gunting manify miolakolaka tsara indrindra ho an'ny alika
440C Stainless Steel 8.0 santimetatra Lehibe Pet Alika ...